Other | our notes for our youngers
Comments (1)	Using String in C# (Part 1)
Filed under: Other — sevenlamp @ 4:48 PM C# Programming language ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ အသုံးများတဲ့ string အကြောင်းကို အနည်းငယ် လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ တကယ်တော့ string ဆိုတာ character တွေစုထားတဲ့ character array ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ string ကို ရေးမယ်ဆိုရင် C# မှာ double code sign ( ” ) အဖွင့်အပိတ်အတွင်းမှာ ရေးရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးပါ….read more…
LeaveaComment	TinyMCE Text Editor
Filed under: Other — sevenlamp @ 4:39 PM ကျွန်တော်တို့ web application တွေမှာ Microsoft Word လိုမျိုး Text Editor တွေ သုံးဖို့ လိုအပ်လာပြီဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အတွက် ရွေးချယ်စရာတွေ အများအပြား ရှိပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ Text Editor တွေက FreeTextBox (http://freetextbox.com), TinyMCE (http://tinymce.moxiecode.com), FCKEditor (http://ckeditor.com) တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ကျွန်တော် FreeTextBox Control ကို သုံးခဲ့ဘူးပါတယ်။ Dot Net 1.1 မှာ သုံးခဲ့တာပါ။ အခုကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတာက TinyMCE Editor ကိုသုံးနေပါတယ်။ ပိုလွယ်တယ် ထင်လို့ပါ။ read more….
LeaveaComment	Silverlight Offline Installation
Filed under: Other — sevenlamp @ 4:01 PM ကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုရဲ့ exe file ကို internet ကနေ download လုပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်က computer မှာ install လုပ်တဲ့ အခါမှာ တခါတလေတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ install လုပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာ installer အတွက် လိုအပ်တဲ့ တချို့ အပိုင်းလေးတွေကို online မှာ သွားရှာပြီး download လုပ်နေခြင်းပါပဲ။ အင်တာနက်ချိတ်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေအတွက် အရေးမကြီးပေမယ့်၊ ကျွန်တော့် အိမ်က ကွန်ပျူတာလိုမျိုး internet မချိတ်ထားတဲ့ computer တွေမှာ install လုပ်ရတော့မယ် ဆိုရင်တော့၊ ဒါဟာ တကယ့်ကို ဆိုးရွားတဲ့ ပြဿနာ တခုဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီအခါမှာ internet မချိတ်ထားတဲ့ offline အခြေအနေမှာပါ install လုပ်လို့ ရမယ့် offline installer ဆိုတာတွေကို ဒုက္ခခံပြီး ရှာကြရပါတယ်။ read more…
Filed under: Other — sevenlamp @ 12:15 PM ကျွန်တော့် ဘလော့လေးကို အခုသုံးနေတဲ့ wordpress ကနေ ကိုယ်ပိုင် site လေးကို ပြောင်းတော့မလို့ပါ။ http://www.sevenlamp.co.cc ပါ။ အခုလက်ရှိ develop လုပ်နေတုန်းပါပဲ။ ဒါကြောင့် ပိုဒ့်တွေ လောလောဆယ် မတင်ဖြစ်သေးပါဘူး။ ဘလော့ အသစ်မှာ နောက်အကျဆုံး 1 Feb 2010 ထားပြီး ပိုဒ့်တွေ စပြီး တင်ပါ့မယ်။ အခု ဒီဘလော့ အဟောင်းလေးက ပိုဒ့်တွေကိုလည်း ပြန်ပြီး ရွှေ့ထားပါ့မယ်။ ဘလော့ အသစ်လေးကို လာရောက် ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အခုမှ developing လုပ်တုန်း ဖြစ်တဲ့ အတွက် အဆင်မပြေတာလေးတွေရှိရင် သည်းခံပြီး ထောက်ပြပေးကြပါခင်ဗျာ။ အကြံဥာဏ်လေးများလည်း တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
Comments (6)	December 3, 2009
Filed under: ASP.NET, Other — Tags: .NET, ASP.NET, C#, programming, Sending Email — sevenlamp @ 4:55 PM ကျွန်တော်ဗျာ ရုံးက frontend system ထဲမှာ email ပို့တဲ့ အပိုင်းလေး မရတော့လို့ ပြန်လုပ်လိုက်ရတာ တော်တော်လေးကို ပင်ပန်းသွားတယ်။ အချိန်လည်း ၂ရက် လောက်ကုန်သွားတယ်။ ( ရသွားလို့ တော်ပါသေးရဲ့ ) ညီတို့လည်း email sending အပိုင်းလေး ရေးဖို့လိုအပ်လာရင် ဒီပိုဒ့်လေးက အသုံးဝင်မှာပါ။
အရင်ဆုံး သိထားရမှာက မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတော့ ဒီ program ကို run လို့မရဘူးနော် :)
&lt;network  host="smtp. sevenlamp.com"
userName=" admin@sevenlamp.com " /&gt;
Filed under: Other — sevenlamp @ 8:09 AM Welcome to my sevenlamp’s blog. Welcome to you all my friends. In this blog, i want to discuss about programming especially C#. Warmly welcome your point of view about my posts.
Comments (3)	My Current Blog…..